Nhau - Simbi microporous zvinhu zvine yakanaka tembiricha kuramba uye yakanakisa mechimiro zvivakwa
Simbi microporous zvinhu zvine yakanaka tembiricha kuramba uye yakanaka mehendi zvivakwa. Kumba tembiricha yemukati, simba resimbi microporous zvinhu zvakapetwa kagumi pane zveceramic zvinhu, uye kunyangwe pa 700 ℃, simba rayo rinenge rakapetwa ka4 pane iro rezvinhu zvedongo. Iko kuomarara kwakanaka uye kupisa kwekushisa kwesimbi microporous zvinhu zvinoita kuti vave nehumwe hwakanaka kupisa kupisa uye kudengenyeka kwenyika kudengenyeka. Uye zvakare, simbi microporous zvinhu zvakare zvine yakanaka yekugadzirisa uye kuwelda zvivakwa. Izvi zvakaisvonaka zvivakwa zvinogadzira simbi microporous zvinhu zvine zvakanyanya kushanda uye hukuru kupfuura zvimwe microporous zvigadzirwa.
Muindasitiri yemazuva ano, simbi Ultramicroporous zvigadzirwa uye tekinoroji zvinoshandiswa zvakanyanya. Kubva pakutanga indasitiri yewatch kune anoshandiswa zvakanyanya emachira indasitiri, firita michina uye yekuchenesa mweya indasitiri, uyezve kune yepamusoro-tech chip indasitiri, kune simbi yekupedzisira microporous tekinoroji.
Tine zvigadzirwa zvekugadzirisa uye zvekuyedza kubva kuGerman, Switzerland, United Kingdom, United States, Italy, Japan nedzimwe nyika. Isu tine yakasimba yekutsigira sisitimu yekugadzira zvigadzirwa, kuyedza kwechigadzirwa uye yakakosha yekugadzirisa maturu, tichienderana nevamwe vekunze. Isu tine yakasimba chigadzirwa kuvandudza kugona uye musika kuchinjika.
Iyo kambani ine dhipatimendi rekutsvaga nekusimudzira, iro rinogona kupa masevhisi anoshanda kune vatengi mukugadzirwa kwechigadzirwa. Uye zvakare, isu tinowirirana nemweya wekuenderera hunyanzvi, uye tinoedza kuburitsa zvigadzirwa zvirinani, kuti tipe kudzoka kwekutsigirwa kwevatengi. Parizvino, kugona kwegore negore kugona uye chaiko zvigadzirwa zve spinneret zvigadzirwa zvekambani yedu zvasvika pamaburi anopfuura mamirioni makumi matatu, uye zviuru zvezvigadzirwa zvinogadziriswa gore rega rega, pakati pazvo mazana ezvigadzirwa zvitsva zvinogadzirwa. Nekuda kwezvinhu zvinotengeswa uye musika wepamusoro mukurumbira, yakakwezva mazhinji epamba makemikari fiber mabhizinesi ekushandira pamwe nekambani yedu. Iyo kambani ine vanopfuura vanopfuura mazana matatu vashandisi mumusika wepamba, uye icho chigadzirwa musika wemugove unopfuura 50%. Zvakare, zvigadzirwa zvedu zve spinneret zvakapinda zvishoma nezvishoma mumisika yeTaiwan, South Korea, Japan, Southeast Asia, South Asia neEurope neAmerica, uye vakawana mukurumbira wakanaka. Iine vatengi vanopfuura mazana matatu munyika dzinopfuura makumi mana, kunyanya muIndia, uko indasitiri yemakemikari fiber iri kukurumidza kukura, ichiverengera inopfuura 60% Mugove wemusika.
Kugadzirwa Kwekugadzira Isina-Yakarukwa Jira, P Non Non dzakarukwa Fabric Production Line, Pp Disc Filter, Asina-Yakarukwa Micheka, Isina-Yakarukwa Jira Nyaya, Pp Nyungudika Yakapepereswa Sefa, Zvese Zvigadzirwa